စီးပွားရေးပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက် Xiaomi နှင့် Nokia တို့ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး » Than Dana
[How to] Google Chromecast ဆိုတာဘာလဲ? Chromecast က ဘာတွေအသုံးဝင်လဲ?
March 7, 2017 4400CommentsBy: Than Dana
Chromecast ဆိုတာ TV နဲ့ Mobile Devices တို့ကြားခံပေးတဲ့ Media Streaming Device တခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘယ်လိုကြားခံရတာလဲ ? ရိုးရှင်းပါတယ်။ မိမိ Chromecast အသုံးပြုမည့် TV မှာ
Home » Xiaomi » News » စီးပွားရေးပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက် Xiaomi နှင့် Nokia တို့ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး
စီးပွားရေးပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက် Xiaomi နှင့် Nokia တို့ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး
ဒီကနေ့ ဂျူလိုင်လ (၅) ရက်နေ့မှာ Espoo, Finland မှာရှိတဲ့ Nokia နဲ့ Beijing, China မှာရှိတဲ့ Xiaomi တို့ဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသဘောတူညီချက်နဲ့ မူပိုင်ခွင့်သဘောတူညီချက်တို့နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုသဘောတူညီတဲ့နေရာမှာ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတခုချင်းစီရဲ့ Cellular Standard ဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်ကိစ္စများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Xiaomi အနေနဲ့လည်း စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အပေးအယူသဘောတူညီမှုကို မူပိုင်ခွင့် ပိုင်ဆိုင်မှု အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် Nokia ထံမှ ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
“ Xiaomi ဟာ ကမ္ဘာ့စမတ်ဖုန်းလောကမှာ ထိပ်တန်းကနေဦးဆောင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်တာကြောင့် အခုလို စီးပွားရေးအတူလုပ်ဆောင်ဖို့ သဘောတူညီမှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်တာကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ် ”
… လို့ Nokia ရဲ့ President & CEO ဖြစ်သူ Rajeev Suri မှပြောခဲ့ပါတယ်။
“ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ Nokia မိသားစုအနေနဲ့ Xiaomi လိုထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုတဲ့အပြင် ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံကိန်းတွေကို ရှေ့ဆက်အတူတကွလုပ်ဆောင်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ် ”
… လို့လည်း ၎င်းမှဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Xiaomi နဲ့ Nokia တို့ရဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီမှုအောက်မှာ Nokia အနေနဲ့ Web providers ကြီးတွေနဲ့ Data center operator တွေမျှော်လင့်ထားကြတဲ့ Power ပိုင်းလိုအပ်ချက်များအတွက် Network ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦးနဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာဒီဇိုင်းများကို စွမ်းဆောင်ရည်ြမင့်မားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Nokia ရဲ့ အသစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့ FP4 Network processor နဲ့ Data center fabric solution တို့ကိုအခြေခံထားတဲ့ Data center interconnection နဲ့ IP Routing တို့အတွက် Xiaomi နဲ့ Nokia တို့ဟာ အတူတကွလုပ်ဆောင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ၎င်းတို့အနေဖြင့် အင်တာနက်ဆိုင်ရာကိစ္စများတိုးပွားအောင်လုပ်ဆောင်ြခင်း၊ VR (Virtual Reality) နဲ့ AI (Artificial Intelligence) တို့နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့အခွင့်အလမ်းများကို အတူတကွစူးစမ်းလေ့လာသွားဖို့အတွက် သဘောတူထားခဲ့ကြပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
အခုချိန်မှာဆိုရင် Xiaomi ဟာ စမတ်ဖုန်းလောကနဲ့အတူ အင်တာနက်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလည်း ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေပြီး EcoSystem platform မှာဆိုရင်လည်း အတော်လေးကိုခရီးရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တမ်းများအရ Xiaomi ရဲ့ EcoSystem devices တွေနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး တရက်လျင် Mi Ecosystem devices ပေါင်း (၈) သန်းခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
“ ကမ္ဘာကြီးအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာနည်းပညာအသစ်တွေကို စူးစမ်းရှာဖွေ၊ ဆန်းသစ်တည်ထွင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ Nokia နဲ့အတူ နောင်လာမယ့်အနာဂါတ်မှာ ပိုပြီးနီးကပ်ရင်းနှီးစွာတွဲဖက်လုပ်ကိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းတွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ် ”
… လို့ Xiaomi Chairman and CEO ဖြစ်သူ Lei Jun က ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ Xiaomi ဟာဆိုရင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာဦးဆောင်သူများနဲ့ ရေရှည်တည်တန့်တဲ့ ရေရှည်မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်နေပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ Nokia နဲ့အတူပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mi Fans တွေအတွက် ပိုပြီးထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးခြင်း၊ ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံသစ်တွေကိုပေးစွမ်းခြင်း၊ မိမိတို့ရဲ့ Users များကိုပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ဖို့အတွက် ကြီးမားတဲ့ကွန်ရက်တွေတည်ဆောက်ခြင်း၊ ကြောက်မက်အံ့သြဖွယ်အစွမ်းသတ္တိတွေနဲ့ ဦးဆောင်မှုတွေမှာ မိမိတို့ကိုအားသာမှုတွေပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ”
… လို့ CEO Lei Jun မှ ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Topics: Lei Jun Nokia Nokia CEO Rajeev Suri Xiaomi Xiaomi CEO Xiaomi News
Previous Post [News] ယခင် Ninebot တွေနဲ့မတူ ပိုပြီးထူးခြားကောင်းမွန်အောင်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Ninebot Plus
Next Post MIUI9ခန့်မှန်းရက်စွဲထွက်ပေါ်ပြီး မကြာခင်မိတ်ဆက်ပေးမည့်အကြောင်း Xiaomi အတည်ပြု
[2017 Mi Product Launch] CPU Core i7 8th Generation အသုံးပြုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Mi Notebook Pro
September 11, 2017 7400CommentsBy: Than Dana
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ… ဒီကနေ့ 2017 Mi Product Launch မှာ ပထမဦးဆုံးစတင်မိတ်ဆက်သွားတာကတော့ Mi Notebook Pro ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Xiaomi ဟာ Smartphones လောကကနေ Notebook PC လောကကို
[2017 Mi Product Launch] ကမ္ဘာ့အလှဆုံးဖုန်းလို့တင်စားထားတဲ့ 18:9 Full Screen Display နဲ့ Mi Mix 2
September 11, 2017 9580CommentsBy: Than Dana
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ… ဒီကနေ့ 2017 Mi Product Launch မှာ Xiaomi ရဲ့ ကမ္ဘာ့အလှဆုံးဖုန်းလို့တင်စားထားတဲ့ Mi Mix2ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မိတ်ဆက်ပေးစဥ် အဆိုပါ Mi Mix 2
[2017 Mi Product Launch] Snapdragon 660 အသုံးပြုထားပြီး Mi6အကြီးစားလို့ပြောလို့ရမယ့် Mi Note 3
September 11, 2017 7810CommentsBy: Than Dana
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ… ဒီကနေ့ 2017 Mi Product Launch မှာ Xiaomi ရဲ့ New Product (၃) မျိုးကို CEO ဖြစ်သူ Lei Jun မှ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
My name is Than Dana, from Toungoo, Bago, Burma. Now, I live in Yangon. I stand asaprofessional at IT fields and has been sharing, inventing and advancing tech developments since 2008. »
© 2017 Than Dana. All Rights Reserved.